Yoshuwa 7 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
7 Yaye oonyana bakaSirayeli benza isenzo sokungathembeki ngokuphathelele into enikelwe kwintshabalalo ngokuthi uAkan+ unyana kaKarmi, unyana kaZabhedi, unyana kaZera, wesizwe sakwaYuda, athabathe ezinye zezinto ezinikelwe kwintshabalalo.+ Wavutha umsindo kaYehova koonyana bakaSirayeli.+ 2 Waza uYoshuwa wathumela amadoda asuka eYeriko ukuba aye eAyi,+ ekufuphi neBhete-aven,+ ngakwimpuma yeBheteli,+ yaye wathi kuwo: “Nyukani niye kuhlola ilizwe.” Ngako oko amadoda enyuka aya kuhlola iAyi.+ 3 Emva koko abuyela kuYoshuwa aza athi kuye: “Mabangenyuki bonke abantu. Makunyuke malunga namadoda angamawaka amabini okanye malunga namadoda angamawaka amathathu ayixabele iAyi. Musa ukubatyhafisa bonke abantu ngokuya phaya, kuba bambalwa.” 4 Ngoko kwenyuka amadoda amalunga namawaka amathathu ukuya apho, kodwa asaba phambi kwamadoda aseAyi.+ 5 Yaye amadoda aseAyi axabela amadoda amalunga namashumi amathathu anesithandathu awo, awasukela+ ukusuka phambi kwesango ukuya kufikelela eShebharim aza aqhubeka ewaxabela ethambekeni. Ngenxa yoko intliziyo yabantu yaqalisa ukunyibilika yaza yanjengamanzi.+ 6 UYoshuwa wazikrazula iingubo zakhe zokwaleka waza wawa ngobuso+ emhlabeni phambi kwetyeya kaYehova de kwangokuhlwa, yena namadoda amakhulu akwaSirayeli, yaye baqhubeka bezigalela ngothuli kwiintloko zabo.+ 7 Yaye uYoshuwa wahlabela mgama wathi: “Awu, Nkosi enguMongami Yehova, kutheni ukuze usiweze iYordan esi sizwana, ibikukuze usinikele esandleni sama-Amori ukuze asitshabalalise? Yaye akwaba bekukholekile kuthi saza saqhubeka sihleli ngaphesheya kweYordan!+ 8 Ndiyangxengxeza, Yehova, kodwa ndinokuthini emva kokuba uSirayeli ezinikele umva iintshaba zakhe? 9 AmaKanan nabo bonke abemi belizwe baya kukuva oko, yaye ngokuqinisekileyo baya kusingqonga baze balinqumle igama lethu emhlabeni;+ yaye uya kwenza ntoni na ngenxa yegama lakho elikhulu?”+ 10 Ke yena uYehova wathi kuYoshuwa: “Sukuma, wena! Kutheni na ukuba uwe ngobuso? 11 USirayeli wonile, yaye bawugqithile umnqophiso wam+ endawubeka njengomyalelo kubo; yaye bathabathe enye yezinto ezinikelwe kwintshabalalo+ yaye bebile+ baza bakugcina kuyimfihlelo+ oko yaye bayifake phakathi kweempahla zabo.+ 12 Yaye oonyana bakaSirayeli abanakukwazi ukumelana neentshaba zabo.+ Baya kuzinikela umva iintshaba zabo, ngenxa yokuba baye bayinto enikelwe kwintshabalalo. Andiyi kuba nani kwakhona ngaphandle kokuba niyibhubhise phakathi kwenu into enikelwe kwintshabalalo.+ 13 Sukuma! Bangcwalise abantu,+ yaye umele uthi, ‘Nize nizingcwalise ngomso, kuba uYehova uTHIXO kaSirayeli uthe: “Into enikelwe kwintshabalalo iphakathi kwakho, Sirayeli.+ Aniyi kukwazi ukumelana neentshaba zenu de niyisuse phakathi kwenu into enikelwe kwintshabalalo. 14 Nimele nizisondeze kusasa, isizwe ngesizwe, yaye kuya kuthi isizwe aya kusikhetha+ uYehova sisondele, intsapho ngentsapho, yaye intsapho aya kuyikhetha uYehova iya kusondela, indlu ngendlu, nendlu aya kuyikhetha uYehova iya kusondela, indoda eyomeleleyo ngendoda eyomeleleyo. 15 Yaye kuya kuthi lowo ukhethiweyo enento enikelwe kwintshabalalo atshiswe ngomlilo,+ yena nayo yonke into eyeyakhe, ngenxa yokuba ewugqithile umnqophiso+ kaYehova nangenxa yokuba enze ubudenge obulihlazo kwaSirayeli.”’”+ 16 Waza uYoshuwa wavuka ekuseni, wamsondeza uSirayeli, isizwe ngesizwe sakhe, kwaza kwakhethwa isizwe sakwaYuda. 17 Wasondeza iintsapho zakwaYuda waza wakhetha intsapho yamaZera,+ emva koko wayisondeza intsapho yamaZera, indoda eyomeleleyo ngendoda eyomeleleyo, kwaza kwakhethwa uZabhedi. 18 Ekugqibeleni wasondeza indlu yakhe, indoda eyomeleleyo ngendoda eyomeleleyo, yaye uAkan unyana kaKarmi, unyana kaZabhedi, unyana kaZera, wesizwe sakwaYuda, wakhethwa.+ 19 Wandula ke uYoshuwa wathi kuAkan: “Nyana wam, nceda, nikela uzuko kuYehova uTHIXO kaSirayeli+ uze wenze uvumo kuye,+ yaye nceda, ndixelele,+ Wenze ntoni? Musa ukundifihlela.”+ 20 UAkan wamphendula uYoshuwa wathi: “Enyanisweni mna—ndonile kuYehova uTHIXO kaSirayeli,+ yaye ndenze ngale ndlela nangalaa ndlela. 21 Ndithe ndakubona+ phakathi kwamaxhoba umnweba waseShinare,+ okhangeleka kakuhle, namakhulu amabini eeshekele zesilivere nesitena esinye segolide, sinobunzima obuziishekele ezingamashumi amahlanu, ndazinqwenela,+ ndaza ndazithabatha;+ yaye, khangela! zifihlwe emhlabeni phakathi ententeni yam nemali phantsi kwayo.”+ 22 Kwaoko uYoshuwa wathumela abathunywa, babaleka baya ententeni, yaye, khangela! yayifihlwe ententeni yakhe nemali phantsi kwayo. 23 Ngoko bazithabatha phakathi ententeni bazizisa kuYoshuwa nakubo bonke oonyana bakaSirayeli baza bazigalela phambi koYehova. 24 UYoshuwa, nawo onke amaSirayeli awayenawo, bathabatha uAkan+ unyana kaZera nesilivere nomnweba nesitena segolide+ noonyana bakhe neentombi zakhe nenkunzi yakhe yenkomo ne-esile lakhe nomhlambi wakhe nentente yakhe nayo yonke into eyayiyeyakhe baza bazinyusa bazisa entilini yeAkore.+ 25 Waza wathi uYoshuwa: “Kutheni na usizisele ishwangusha nje?+ UYehova uza kukuzisela ishwangusha ngalo mhla.” Ngoko wonke uSirayeli wamgibisela ngamatye,+ emva koko babatshisa ngomlilo.+ Ngaloo ndlela babaxuluba ngamatye. 26 Yaye banyusa phezu kwakhe imfumba enkulu yamatye, kude kube ngalo mhla.+ UYehova wabuya ekuvutheni komsindo wakhe.+ Kungenxa yoko le nto igama laloo ndawo liyiNtili yeAkore,+ kude kube ngalo mhla.